Ishidi le-rubber labicah lokucindezela i-vacuum
Ishidi le-rubber labicah lokucindezela i-vacuum lenzelwe futhi lenziwa lethu inkampani ezinikele ekusekeleni umshini wokucindezela ngokusho kwemakethe.
Ishidi le-rubber labicah lokucindezela i-vacuum liyinto ebalulekile yomshini wokucindezela umshini, lizoba nomthelela oqondile ekusebenzeni kwefilimu nasekusebenziseni izindleko zomshini wokucindezela.
Ishidi le-rabha le-Silicone le-vacuum press elikhiqizwa inkampani yethu lisebenzisa izinto zokusetshenziswa zaseJalimane ezingenisiwe, lamukela ubuchwepheshe bokukhiqiza obuhle kakhulu nemishini yobuchwepheshe obuphambili, umkhiqizo unezinga lokushisa eliphakeme, ukumelana nokuguga, ukumelana nokugqwala, ukuqina, ukuguquguquka okuphezulu, okungekho ubuthi nokungangcolisi, akunambitheki , kanye nezinto ezingezona zokunamathela ezingaphezulu kwe-inert, ngakho-ke ishidi le-membrane elinwebeka lokucindezela lomshini.
Ukudiliza amandla(N / mm) Ubulukhuni(Ugu A)
I-KXM21 6.5 26 60 ~ 75 450 Mhlopheokusobala Izinhlangothi ezimbili zibushelelezi
I-KXM22 9.0 32 50 ~ 70 650 Okumpungaokusobala Izinhlangothi ezimbili zibushelelezi
ulwelwesi lwe-silicone yelanga lwenziwa nge-high quality abicah iraba emshinini wohlobo lwe-vulcanizing press noma e-vulcanizing press ngokuya ngesicelo esihlukile kubathengi. Thina i-erba sincike ekuphatheni okuthuthukile, amasu amasha nokulawulwa kwekhwalithi eqinile ngezinto ezibonakalayo zerabha le-abicah nomshini, kuphakamisa inkinga yendawo ephansi ebushelelezi nokubekezelelana okukhulu kobukhulu bomshini we-ROTOCURE vulcanizing, futhi kuphume inkinga yobubanzi obukhawulelwe, ubude nokujoyina okubonakalayo emshinini wokuqhafaza ocindezela. Inqobile ngaphandle kokuhlangana futhi ngobude obungenamkhawulo ngaphansi kobuhle obushiwo ngenhla. Sine-press-wide wide-type vulcanizing press enobubanzi obungu-4000mm nemikhiqizo esezingeni eliphakeme ebuningini obungu-3600mm ngaphandle kokuhlangana. Ikhwalithi ephezulu ye-silicone yerabha enokusebenza okuhle kokulwa nokuguga, ukumelana ne-ozone, ukumelana nokushisa, ukuvimba ugesi, ukumelana nowoyela, ukumelana ne-solvent, ukumelana nokugqwala, okungenabuthi futhi okungenanambitheki, ukungangcoliswa umoya. Ukusebenza emoyeni, emanzini, uwoyela nokunye okuphakathi ekushiseni kwe -60 ° C - + 260 ° C (isikhashana esiphezulu se-300 ° C) ngokuzinza okuphezulu, ukuthembeka kanye nobuso obungasebenzi ngaphandle kokunamathela. Faka isicelo sokushaya zonke izinhlobo zensimbi yerabha gasket noma okhethekile we-PVC umshini wokulaminetha umshini, umshini wokhuni wokuhlanza umshini wokhuni, umshini wokugcoba ingilazi, umshini wokucwilisa umshini welanga, umshini oshisayo wokukhipha umshini kanye nomshini wokukhipha amakhadi njll.
Langaphambilini Ishidi Le-Rubber Lama-Silicone Lokucindezela Umshini
Olandelayo: Abicah Rubber Cushion Wokushisa Okushisayo